बिराटनगरक युवाहरुले भने सरकार १० अर्ब खै ? | बिराटनगरक युवाहरुले भने सरकार १० अर्ब खै ? – हिपमत
बिराटनगरक युवाहरुले भने सरकार १० अर्ब खै ?
सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बिहीबार प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा पनि प्रदर्शन गरिएको छ । युवाहरुले कोरोना भाइरस संक्रमणका नाममा खर्च भएको १० अर्बको हिसाब माग गर्दै उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
-कान्तिपुर पत्रिकामा माधव घिमिरेले लेखेको समाचार